Hotjar: Heatmaps, Funnels, Edekọ, Nchịkọta na Nzaghachi | Martech Zone
Hotjar na-enye akụrụngwa zuru ezu maka ịlele, ndekọ, nyocha na ịnakọta nzaghachi site na weebụsaịtị gị n'otu ngwugwu ọnụ. Dị nnọọ iche na ngwọta ndị ọzọ, Hotjar na-enye atụmatụ na atụmatụ dị ọnụ ala dị mfe ebe ndị otu nwere ike iwepụta nghọta na ihe ọnụọgụ weebụ - ma mee ka ndị a dị maka otu enweghị ọnụ ọgụgụ nke ndị ọrụ.
Nnwale nyocha Hotjar gụnyere
Heatmaps - na-enye ihe nlere anya nke clicks ndị ọrụ gị, taps na omume ịpịgharị.
Ihe nleta ndị ọbịa - ndekọ omume esenowo na saịtị gị. Site na ihu ihe nleta onye nleta gi, taapu, mmeghari uzo ị nwere ike ichota nsogbu ojiji na ﬂ y.
Ihe ntụgharị ntughari - chọpụta peeji nke na usoro nke ọtụtụ ndị ọbịa na-ahapụ itinye aka na akara gị.
Analydị Analytics - Mma online ụdị ẹkụre udu site chọpụtara nke ubi buru oke ogologo na-, nke na-ekpe oghere, na ihe mere gị ọbịa hapụ gị ụdị na peeji nke.
Ntuli aka nzaghachi - Meziwanye ahụmịhe weebụsaịtị gị site na ịjụ ndị ọbịa ihe ha chọrọ na ihe na-egbochi ha imezu ya. Zaa ajụjụ nye ndị ọbịa ụfọdụ ebe ọ bụla na ebe nrụọrụ weebụ gị na ebe nrụọrụ weebụ.
Nnyocha ndị e mere - Mee nyocha nke gị iji nyocha ederede. Na-anakọta nzaghachi na ezigbo oge site na ngwaọrụ ọ bụla. Kesaa nyocha gị site na iji njikọ weebụ, ozi ịntanetị ma ọ bụ kpọọ ndị ọbịa gị tupu ha ahapụ saịtị gị iji kpughee ihe ha jụrụ ma ọ bụ nchegbu ha.
Mụọ ndị ọrụ nnwale - Nabata ndị sonyere maka nyocha onye ọrụ yana nwalee ozugbo na saịtị gị. Na-anakọta ozi profaịlụ, kọntaktị nkọwa ma nye onyinye n'ọnọdụ mgbanwe maka enyemaka ha.
Debanye aha maka nnwale Hotjar na-akwụghị ụgwọ
Hotjar na-atụ aro usoro 9 a iji meziwanye ahụmịhe ndị ahịa gị na ntụgharị.
Tọọ a Okpomọkụ na elu okporo ụzọ na elu ibiaghachi ọdịda peeji.
Chọpụta 'ndị ọkwọ ụgbọala' na Ntuli aka nzaghachi na elu peeji nke ọdịda peeji nke.
Survey ndị ọrụ gị / ndị ahịa dị ugbu a site na email.
Tọọ a foneelu iji chọpụta ihe mgbochi kachasị nke saịtị gị.
Melite Ntuli aka nzaghachi na peeji mgbochi.
Melite Heatmaps na peeji mgbochi.
Iji Nleta ndị ọbịa ka ịghaghachi sessions ebe ndị ọbịa na-apụ na peeji mgbochi.
Naa Ọrụ Ule ikpughe ọkwọ ụgbọala na-edebe ihe mgbochi.
Kpughee 'Hooks' na a Nzaghachi Nzaghachi na ibe gi nke oma.
Tags: ntughari foneelu nyochantughari funnelsokpomokuikpo ọkụokpomokuhotjarndekọ ndekọ onye ọrụndekọ ndị ọbịangwá ọrụ nyocha nke ndị ọbịaNyocha ndị ọbịa